Umkhuba Wentuthuko We-Acrylic Emkhakheni Wokukhangisa
I-Acrylic, eyaziwa njenge-plexiglass, ingumkhiqizo we-petroleum. Okubalulekile okusetshenzisiwe okuyizinhlayiya ze-MMA futhi igama lamakhemikhali yi-methyl methacrylate. Izindawo ezisetshenziswa kakhulu yilezi: imboni yokukhiqiza yokukhangisa, ukuhlobisa okuhlobisa ...
Ukusuka Ekuhlanganisweni Okuyingxenye Kuya Ezweni Lonke, Ukuphathwa Kwezimpahla Kusenza Sisondele Kakhulu
Lapho amakhasimende amaningi eqala ukwazi umkhiqizo wethu, ayekhathazekile ngokuthi umkhiqizo uzothunyelwa kanjani endaweni yawo nokuthi uzowufaka kanjani kamuva. Lesi sihloko sizokuphendula ngokuningiliziwe. Yize inkampani yethu iseChengdu, ngokuchuma kwemboni yezimpahla, sine p ...
Ungaqinisekisa kanjani ukuthi Ibhokisi Lokukhanya Kwesibonakaliso Akulula Ukukhubazeka Nokufiphala?
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwamabhokisi wokukhanya wokukhangisa nezinhlamvu ezikhanyayo, izinto ze-acrylic zisetshenziswa kakhulu kulo mkhakha, kepha akuwona wonke amabhokisi akhanyayo enziwe ngamaphrofayili we-acrylic amelana nokuguquguquka futhi akulula ukushintsha umbala. Ishidi le-Acrylic ...
IZhengcheng Advertising Uqedile umbukiso wase China Retail Expo
I-China Retail Industry Expo (CHINASHOP) ixhaswe ngokubambisana yiChina Chain Store Franchise Association (CCFA) neBeijing Zhihe Lianchuang Exhibition Co., Ltd., futhi eyenziwe nguBeijing Zhihe Lianchuang Exhibition Co., Ltd. Kusukela yaqala ...
Izimpawu Zokukhangisa, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light, I-Blister Light Box Signboard, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso, I-Pharmacy Signboard, Izimpawu Ezikhanyisiwe,